Blackjack liyindawo ethandwayo kakhulu zakudala yekhasino based ithebula umdlalo futhi kukhona ezahlukeneyo eziningi ku-inthanethi nge ezahlukene izici ohlangothini ukubheja kanye Hi Lo Umgembuli ingenye amakhasino ifoni enjalo umdlalo phezulu. Le nguqulo has ukunikeza izandla ungakwazi ukugembula kanye uhlangothi ukubheja isandla ngayinye ezikhulisa amathuba akho okuwina ngaphezulu. Ungathola itafula izinga okusezingeni setha efanele nge onezitezi of amakhadi, chips, futhi iBhodi ukulandelela isimo sakho. Kukhona mnandi-orchestra umculo udlala ngemuva ukuba hlala usangulukile ukukhahlela futhi waphiliswa umdlalo. Umkhawulo ukubheja kokubili imidlalo main futhi emibi £ 1 iminithi kanye max of £ 500 isandla ngasinye.
Mayelana unjiniyela Hi Lo Umgembuli :
Umthuthukisi kuyinto NYX (Ongokoqobo) futhi njengoba leli gama lisikisela banikela namaqiniso udlala isipiliyoni zonke yekhasino yabo imidlalo. Nge themes amazing kanye izici ezintsha efonini yabo amakhasino phezulu umdlalo isigaba, baye wakwazi ukubeka ngokwabo phakathi phezulu simo game Onjiniyela emhlabeni.
Le foni casino game phezulu kulandela imithetho ejwayelekile futhi eziyisisekelo Classic Blackjack game lapho umgomo wakho ukushaya umthengisi ngokuthola 21 amaphuzu noma inombolo osondele kulowo. Khumbula ukuthi uma idlule 21 amaphuzu, ulahlekelwa ukuthi isandla kanye esifanayo siyasebenza wonke amanye izandla. Une inketho ukubeka kubhejwa wakho kunoma iyiphi inombolo yezandla kusukela zi oyedwa kuya kwabahlanu ngokufanayo ngohlangothi ukubheja umdlalo ubizwa ngokuthi 'Sawubona Lo'. Lapha uzothola kuyofanele nakanjani zikhethe phakathi Sawubona noma: 'Bhekani, lapho ungakwazi ukunqoba nge high uma imoto yakho yesibili ungowenani ephakeme kunaleyo ngowokuqala futhi ukunqoba ne bheka yesibili kufanele ibe namanani ongaphansi lokuqala.
game Izintandokazi: Kukhona ezinye izilungiselelo ewusizo umdlalo kule foni casino game phezulu ezifana ekushintsheni umbala isihloko etafuleni begodu nokutjhugulula ivolumu yomculo, nemisindo, & izwi umthengisi sika. Ungase futhi vumela noma vimbela umshwalense ngokushesha, ngisho imali, umdlalo izixwayiso, auto ukuma nokususwa ngokudayisa amakhadi.
Stand okuzenzakalelayo: Lena ngenye sici ewusizo uma ufuna isandla sakho ukuma ngokuzenzakalela kwi-hard 17, 18, 19 noma 20 kanye ezithambile 19 & 20. Lapho umuntu emi lezi zinombolo ngokuvamile Kunconywa ukuze ugweme ukuthola ngokudayisa.
wokukhokha: Eshayayo isandla nomthengisi sika izokukhokhela 100% ukubheja yakho lemali, umshwalense okhokhela 150% futhi onqobayo blackjack sikukhokhela 250% ukubheja yakho lemali.
Isifinyezo: Le foni casino game phezulu umdlalo umlutha kakhulu nge side ukubheja sici ukwandisa Yokuwina yakho amathuba. Izici nezinketho kugqame ngempela eyenza lo mdlalo okuhlukile okukodwa ethandwa iningi blackjack.
Hi Lo Umgembuli